K/Waqooyi oo tijaabo horleh samaysay - Worldnews.com
Warbaahinta Qaran ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in tijaabadan cusub
Kuuriyada waqooyi oo tijaabo hor leh samaysay
Dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in ay tijaabisay matoor loo qaabeeyay in uu gantaalada ridada dheer gaarsiin karo qaarad ka qaarad. Wakaaladda wararka ee KCNA ayaa...
BBC News 2016-04-09
Saynisyahanno Shiinays ah ayaa sheegay in ay qayb ahaan duntay xaruntii ay Kuuriyada Waqooyi ku tijaabin jirtay hubka nukliyeerka ah, taas ka dhigi karta mid aan la...
Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa ku eedeeyay Kuuriyada Waqooyi in ay xushmad darro u muujisay Shiinaha oo ah saaxiibka ugu weyn ee ay leedahay, ka dib markii ay...
Mareykanka oo cambaareeyay tijaabada Kuuriyada Waqooyi
Dowladda Mareykanka ayaa codkeeda ku dartay cambaareynta loo soo jeedinayo Kuuriyada Waqooyi taas oo tijaabisay wax ay ku sheegtay hub nukliyeer ah oo si fiican loo...
Mareykanka oo "ciidamo dheeraad ah geynaya badda Pacific"
Mareykanka, Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa dalbaday kullan degdeg ah oo Golaha amniga uu isugu yimaaddo. Baaqaas ayaa imaanayo ka dib markii Kuuriyada Woqooyi ay...
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, Kim Jong-un, ayaa sheegay in dalkiisa uu u dhaw yahay inuu tijaabiyo sawaariikh isaga kala gudbi karta qaaradaha oo xambaari karta hubka...
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, Kim Jong-un, ayaa sheegay in dalkiisa uu u dhaw yahay inuu tijaabiyo sawaariikh isaga kala gudbi karta qaaradaha oo xambaari karta hubka nukliyeerka. Waxa ay marayaan "heerkii ugu dambeeyay", sida uu kaga dhawaaqay farriintiisa sanadka cusub ee taleefishinka laga sii daayay. Waxa uu sheegay in dalkiisa uu leeyahay awood milateri. Pyongyang ayaa...
Wasiiradda gaashaandhigga ee Maraykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan, ayaa wacad ku maray in ay xoojinayaan isdhaafsiga xogtooda sirdoonka, ka dib markii ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay gantaal nooca ballistic-ga ah ee nukliyeerka qaada. Maraykanka ayaa carrabka ku adkeeyay in a ka go'antahay sugidda ammaanka labadaasi dal ee saaxiibka la ah, sida ay sheegtay wasaaradda...
Xogtan kooban kaga bogo mashaakilka ka dhex aloosan labada Kuuriya
Ismariwaaga Kuuriyada Waqooyi ayaa gaaray meeshii ugu sarraysay, wuxuuna keenay cabsi laga qabo in uu dhaco weerar nukliyeer loo adeegsaday. Isbadalkan degdegga ah ee ku saabsan in ay ay wadahadal toos ah la yeelanayaan Maraykankana waxaa laga yaabaa in ay ka dhigan tahay in nabaddu fursad hesho. Laakiin waa arrin murugsan marka bal aan tallaabo gadaal u yaraha qaadno si aan...
Dowladda Kuuriyada Koofureed ayaa waxay ka digeysaa in Kuuriyada Waqooyi ay isu diyaarineysa inay nukliyeer kale tijaabiso. Waxay sheegtay in ay sidaa ka ogaatay sawirro dayax gacmeed oo laga qaaday gobol buuraley ah, oo la aaminsayhay in lagu diyaarinayo tijaabo nukliyeer. Wakaaladda...
Maraykanka oo cunaqabateeyay dadka gantaallada u hormariya Kuuriyada Waqooyi
Dawladda Maraykanka ayaa cunaqabatayn dul dhigtay labo sarkaal oo Kuuriyada Waqooyi u dhashay, kuwaas oo ay ku sheegtay in ay yihiin kuwa dalka ku hogaamiyay in uu hormariyo gantaalladiisa nukliyeerka. Wasaaradda Maaliyadda ayaa shaacisay magacyada Kim Jong-sik iyo Ri Pyong-chol iyada oo ku sheegtay "in ay labadooduba yihiin hogaamiyeyaasha barnaamijyada gantaallada riddada...